Somaliland Oo Go’aan Adag kasoo Saartay Sarifka Online-ka Ee Forex.(Akhriso) -
Qoraal maanta kasoo baxay Bangiga dhaxe ee maamulka Somaliland ayaa lagu mamnuucay Suuqa sarifka Onlinka ee loo yaqaan Forex in uu ka shaqeeyo deegaanada ay maamusho.
Bangiga dhaxe ee Somaliland ayaa qoraalka uu soo saaray waxa uu ku sheegay in Suuqa Forex uu lamid yahay barnaamijkii la oran iray Jiif oo Jaq oo horey uga jiray deegaanada somaliland balse markii dambe suuqa ka baxay.
Go’aankan adag ee kasoo baxay Somaliland ayaa kusoo aadaya xili guud ahaan Soomaaliya ku baaheen shirkado ka shaqeeya sarifka Onlinke ee loo yaqaan Forex, kuwaa oo dadka lacago ka qaadanaya una sheegaya in faa’iido badan ku helayaan lacagtooda.
Senator Bernie Oo ka Tanaasulay Tartanka Doorashada Madaxtinimada Maraykanka.
Senator Bernie Sanders oo ahaa musharrax u ordayay magacaabista xisbiga Dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ayaa Arbacada maanta ah ku dhawaaqay inuu ka haray tartanka. Go’aanka Sander ayaa waxa…